Iphedi yokuchukumisa, yikhubaze ngelixa uchwetheza okanye xa imouse ixhunyiwe | Ubunlog
UDamien A. | 18/06/2021 14:14 | Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba sinokwenza njani khubaza iphedi yokuchukumisa yelaptop yethu ngelixa ubhala okanye xa uqhagamshela imouse yangaphandle. Umhleli we-Dconf esinokuwusebenzisa kwi-GNOME unikezela ngeendlela ezininzi kwimouse kunye nephedi yokuchukumisa. Ukusuka apho sinokukhubaza iphaneli yokuchukumisa ngokusisigxina.
Nangona kungekho khetho ngokuthe ngqo kuseto lwenkqubo yokusebenza kwe-Ubuntu ukukhubaza iphedi yokuchukumisa ilaptop ngelixa usebenzisa imouse yangaphandle, okanye ukukhubaza iphedi yokuchukumisa ngelixa uchwetheza, amathuba ambalwa anokufumaneka ukwenza ezi zinto zimbini zinokwenzeka. Nangona kufuneka kuthiwe ukuze imiyalelo isebenze, kuyakufuneka usebenzise i-GNOME Shell desktop kunye ne-libinput.
1 Khubaza ngokuzenzekelayo iphedi yokuchukumisa xa imouse ixhunyiwe
1.1 Ukusuka kwiDconf
1.2 Ukusuka kwisiphelo
1.3 Sebenzisa isalathiso seTouchpad
2 Khubaza iphedi yokuchukumisa ngelixa sibhala
Khubaza ngokuzenzekelayo iphedi yokuchukumisa xa imouse ixhunyiwe
ukuba khubaza iphedi yokuchukumisa xa uqhagamshela imouse yangaphandle kwaye uphinde wenze iphedi yokuchukumisa xa unqanyuliwe, sinokusebenzisa umhleli we-Dconf, okanye sinokusebenzisa umyalelo kwisiphelo sendlela.
Inkqubo Umhleli we-Dconf unokufakwa ngokulula kukhetho lwesoftware Ubuntu.
Kuya kufuneka uhlale uyikhumbula loo nto Nje ukuba sikwazi ukukhubaza iphedi yokuchukumisa ngelixa usebenzisa imouse, useto lwephedi yokuchukumisa ayisayi kubakho.
Ukuba sivula umhleli weDconf, sinako cima imouse edityaniswe kwiLaptop xa sidibanisa imouse yangaphandle. Kuya kufuneka siye ngqo kwindlela / org / gnome / desktop / iipheripheriti / iphedi yokuchukumisa.
Xa sele silapho, kuya kufuneka senjenjalo Cofa apha thumela-iminyhadala kwaye ukhubaze ukhetho Sebenzisa ixabiso elisisiseko. Emva koko kuya kufuneka khetha 'okhubazekileyo-kwangaphandle-imouse'njengexabiso lesiko. Ukugqiba, kufuneka ucofe nje kwiqhosha aplicar. Oku kuhlala emazantsi efestile yoMhleli weDconf, kwaye kuyavela emva kokwenza naluphi na utshintsho.
Ukuba ufuna ukuguqula oku, yenza kwakhona ukhetho kwakhona "Sebenzisa ixabiso elisisiseko".
Unako kwakhona khubaza iphedi yokuchukumisa xa imouse yangaphandle iqhagamshelwe ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo Kwisiphelo (Ctrl + Alt + T):
Kwimeko apho ufuna lungisa utshintsho olwenziwe ngumyalelo wangaphambili, ungasebenzisa lo myalelo:
Sebenzisa isalathiso seTouchpad
Ukuba olu khetho lungentla alusebenzi, njengoko kubonakala ngathi alusebenzi nazo zonke iilaptops kunye nazo zonke iimpuku, ungazama ukusebenzisa iTouchpad-Isalathi njenge ngenye indlela, Efumaneka kwi-PPA ye-Ubuntu / Linux Mint.
I-touchpad-Isalathi iya kusivumela ukuba sikhubaze iphaneli yokuchukumisa xa imouse iqhagamshelwe kwikhompyuter, kodwa inika eminye imisebenzi, enje ngokuvumela okanye ukuyikhubaza kwimenyu, kunye nokwenza okanye ukukhubaza ipaneli yokubamba xa usetyenziso iqala okanye iyavala.
ukuba ukufikelela kwi icon yeTouchpad-Isalathiso ukusuka kwiphaneli yeShell ye-GNOME, kuyakufuneka ukuba kufakelwe ulwandiso I-KStatusNotifierItem / Inkxaso ye-AppIndicator okanye ezifanayo.
Kwakhona kukho i Ulwandiso lweShell ye-GNOME Isalathi sephedi-Isalathi (kwinkcazo yayo kukhankanyiwe ukuba iyahambelana neGNOME Shell 3.36 nangaphambili), Ezama ukufezekisa into enye. Nangona ayihambelani neWayland.
Khubaza iphedi yokuchukumisa ngelixa sibhala
Ukukhubaza iphedi yokuchukumisa njengoko sichwetheza lolunye ukhetho olungafumaneki ngokuthe ngqo kuseto lwenkqubo yeShell ye-GNOME. Kodwa oku kunokwenziwa ukuba kusetyenziswe iapp UMGAQO WOKUGQIBELA.
Inketho yokukhubaza iphedi yokuchukumisa ngelixa ubhala ifumaneka kwi useto esinokulufumana kukhetho Ikhibhodi kunye nempuku. Apho kufuneka sifumane icandelo Touchpad, kwaye ngezantsi kukho ukhetho "Khubaza xa uchwetheza".
Unokukhubaza imouse eyakhiwe kwilaptop usebenzisa Umhleli weDconf. Olu khetho lufumaneka kwi / org / gnome / desktop / iipheripheriti / iphedi yokuchukumisa / ukukhubaza-ngelixa uchwetheza.
Enye into enokwenzeka ukufezekisa oku iya kuba vula itheminali (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenzise umyalelo:
Kwimeko apho ufuna phindisela iziphumo zalo myalelo kwaye ungakhubazi iphedi yokuchukumisa ngelixa uchwetheza, umthetho oza kuwusebenzisa uya kuba:
Yonke into ebonwe kule migca ndiyifumene ipapashwe kuyo Ukuvukelwa kweLinux. Kwaye njengoko ndiyifumene into eluncedo ngokwenene ukuze ndisebenze kunye nelaptop, ngaphandle kwephedi yokuchukumisa yokuhambisa isikhombisi semouse, ikwapapashwa apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Iphedi yokuchukumisa, yikhubaze ngelixa uchwetheza okanye xa imouse ixhunyiwe